Nnwom 16 NA-TWI - Gyidi mu mpaebɔ - Bɔ me ho ban, O - Bible Gateway
Nnwom 15Nnwom 17
Nnwom 16 Nkwa Asem (NA-TWI)
16 Bɔ me ho ban, O Onyankopɔn; migye wo di sɛ me guankɔbea. 2 Meka kyerɛ Awurade se, “M’awurade ne wo; nneɛma a mewɔ nyinaa fi wo nkyɛn.” 3 Awurade nkurɔfo a wɔyɛ pɛ wɔ gyidi mu no, wɔn na m’ani gye sɛ me ne wɔn bɛtena. 4 Wɔn a wokodi anyame foforo akyi no twe ɔhaw brɛ wɔn ho. Merenkɔka wɔn afɔrebɔ ho, na merensom wɔn anyame nso.